Is-beddelka cimillada Soomaaliya oo laga digay | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Is-beddelka cimillada Soomaaliya oo laga digay
Is-beddelka cimillada Soomaaliya oo laga digay
Muqdisho-(SNTV)-Qubaro xagga degaanka ah oo uu fadhigeedu yahay Magaalada Muqdisho ayaa ka digtay Khatarta ay leedahay is-beddelka Cimillada Soomaaliya, iyadoo sidii kalena baaq arrintaasi ku aaddan u diray Dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Maxamed Sheekh Cumar, oo ka mid ah Madaxda hay’adda Conservation of Somalia, ayaa warbaahinta Qaranka u sheegay in ay jirto halis xagga degaanka oo halis ku ah Cimillada Dalka, isagoo taasina ku macneeyay Wasakhowga Hawada oo ay ugu wacan tahay isticmaalka Baabuurta oo u badan kuwo aad u gaboobay, Wershadaha yar-yar, gubista Qashinka oo aan lagu asturin halkii loogu talagalay.
Dowladda Soomaaliya ayuu usoo jeediyay Qabiirku in ay xakamayso dabagalna ku samayso Gaadiidka soo degayo, Shidaalka ay isticmaalayaan, Matoorrada kala duwan iyo goobaha la dhigayo, meelaha lagu gubo qashinka, isagoo Bulshadana ku boorriyay in ay Gacn buuxda ku siiyaan Dowladda xilna iska saaraan ilaalinta Degaanka, si ayan ugu iman Cudurro anay aqoon oo ka dhasha Wasaqowga Hawada.
Previous articleMas’uuliyiin ka tirsan Galmudug oo kormeeray xarunta Taliska Booliska ee Gobolka Mudug
Next articleAl-Shabaab oo 100 Carruur ah ka Af-duubatay Gobolka Bakool
Dulimaadyadii iyo dagitaanka Diyaaradaha ee Garoonka Aden cade oo saakay la fasaxay.
Dowladda Ingiriiska oo hambalyo u dirtay mudane Xasan Shiikh Maxamuud oo mar kale loo doortay madaxweynaha Soomaaliya.
Dulimaadyadii iyo dagitaanka Diyaaradaha ee Garoonka Aden cade oo saakay la...
Dowladda Ingiriiska oo hambalyo u dirtay mudane Xasan Shiikh Maxamuud oo...